Xiriiriyaha Hawlaha bini’aadamo ee Qaramadda Midoobay Mixewall Gaylar oo ku sugan Magaaladda Baladwayne ee Gobalka Hiiran ayaa kala hadlaya Odayaasha Deegaanka sidii la isaga kaashan lahaan Suggidda Ammaanka shaqaalaha Samafalka,.
Gaylor oo shalay gaaray Baladwayne ayaa kulan uu maanta la yeeshay qaybaha kala duwan ee Bulshadda Gobalka Hiiraan waxa uu kala hadlay sidii loo illaalin lahaa Nabadgalyadda Shaqaalaha Hay’adda Samafalka, Waxaana uu kulankaasi kaga dhagaystay qaybaha kala duwan ee Bulshadda warbixin ku aadan Xaaladda Ammaanka ee Gobalka.
Ugaaas C/laahi Ugaas C/raxmaan oo ah oday Dhaqameed si wayn looga tixgaliyo Gobalka Hiiraan ayaa kulankaasi kadib u sheegay Saxaafadda inay kala hadleen Gaylor sidii Qaramadda Midoobay ay Hawlaheeda Gobalka u kordhin lahayd, Wuxuuna sheegay in inkastoo uu Gaylor aqbalay codsigooda uu haddana wal wal ka muujinayay Ammaanka Gobalka oo uu sheegay in meelaha qaarkood aan la isku halayn Karin.
Socdaalka Mixewell Gaylor ee Magaaladda Baladwayne ayaa yimid xilli ay Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, eedayn kulul u jeedisay Qaramadda Midoobay iyo Laamaheeda Gargaarka, Waxaana uu shalay ku sheegay Madaxwayne C/qaasim shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay inay qarashaadka caalamku ugu talagalay Somalia ku bixiyaan Madaxda Hay’aduhu Hawlo u gaar ah iyo Tamashlaynta iyaga iyo Caruurtooda.
Dallada Culumadda Soomaaliyeed ayaa qaylo dhaan xoogan ka soo saartay Olole ay sheegtay in lagu Kirshtaamaynayo Dadka Soomaaliyeed.
Guddoomiye Ku Xigeenka Dallada Culumadda Soomaaliyeed, Shiiq Nuur Baaruud oo ka hadlayay Shir Jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in hay’addo sheeganaya Samafal ay billaabeen inay Buugaag ka hadlayay Diinta Masiixiga u qaybiyaan Iskuuladda Dalka Somalia, Wuxuuna si gaar ah farta ugu goday Hay’addaha Swiss Church ee Fadhigeedu yahay Magaaladda Marka.
Shiiq Nuur Baaruud waxa uu ka digay in laga ganacsado Buugaagtaasi iyo dhamaan Agabka kale ee ay ku cad yihiin Calaamadaha Kirishtaanku, Waxaana uu sheegay in Soomaalida lagu yaqaano inay yihiin dad ad adag oo aan iibsan Diintooda iyo Damiirkooda sidaas darteed waxa uu sheegay inuusan filayn marnaba in Diinta Islaamka oo ah tan kaliya ee Somalia ka jirta la badalo.
Intii uu Shirkaasi Jaraa’id socday waxay Culumaa’udiinka Soomaaliyeed soo bandhigeen Qalab kala duwan oo uu ka mid yahay Bible-ka Diinta Masiixiga, Alaabo ay Caruurtu ku ciyaaraan oo ay ku qoran yihiin erayo Af Ingiriisi ah oo la macno ah Dhoolo Caddee Ciise Waa Ku Jecelyahaye, Smile, Jesus Loves You, Waxaana looga digay Caruurta iyo Waalidiintoodaba inay ku kadsoomaan waxyaabahaasi lagu badalayo Caqiidadooda Saliimka ah.
Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, Golaha Samata Bixinta Qaranka iyo Kooxda G-8 ee uu hogaamiya Qanyare ayaa qoraal ay ka soo saareen Nairobi waxay ku dalbadeen in Shirka Nairobi gacanta loo galiyo Soomaalida.
Qoraalkan oo ay soo saareen saddexda dhinac kadib markii ay shir Saacado socday shalay ku yeesheen Nairobi ayeey ugu dambayntii iskula garteen in Shirka Kenya looga badbaadin karo fashil ku yimaaada haddii Shirguddoonka laga dhigo Soomaali, isla markaana ay IGAD iyo goobjoogayaasha Caalamiga ahi yeeshaan oo kaliya fududaynta Tasiilaadka lagama maarmaanka u ah socodsiinta Shirka, Waxayna sheegeen in IGAD mudadii ay hogaaminaysay Shirka ay dadaal badan muujisay Laakiin ay jiraan Qaladaad ay galeen.
Hadal gaaban oo ay dhinacyadda shirkan yeeshay siiyeen Saxaafadda waxay ku sheegeen inay Qoraal Rasmiya u gudbiyeen Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya, Waxayna sheegeen in sidoo kale ay waydiisteen Wasaaradda inay ka noqoto go’aanka ay dalkeeda uga mamnuucday Baasaboorka Soomaaliga oo ay sheegeen inay u muuqato tallaabo lagu kala goynayo Kooxaha siyaasadda ee ku sugan Nairobi iyo Taageerayaashooda
Kooxahan shalay shiray oo baaqi ku ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay Madasha Shirka Soomaalidu ka socday ayaa cabashooyinka ay gudbiyeen waxay u muuqataa inay wax xoogaa yaraatay Rajadii ay ku qabaan Shirka Soomaalida uga socday Kenya.
Gudoomiyaha Golaha Abaabul Qarameedka, Maxamed Cumar Xabeeb “Maxamed Dheere” ayaa ka laabatay go’aankii uu kol hore Deegaanadda uu ka taliyo uga mamnuucay Xirashadda Indhashareerka.
Maxamed Dheere oo ka hadlay Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ka laabashadda go’aankiisa uu ku mamnuucay Indhashareerka ay timid kadib markii ay cabashooyin badan uga timid Culumadda Soomaaliyeed, Wuxuuna u Mahad Celiyay Dalladda Culumadda Soomaaliyeed iyo Urur Diimeedka Ahlu Sunna Waljameeca oo uu sheegay inay u faah faahiyeen waxa ay Diintu ku qabto Indhashareerka.
Maxamed Dheere waxa uu sheegay inuu xaqiiqsaday in Indhashareerku uusan ahayn Waajib Diiniya balse uu yahay dhaqan Dumarka Islaamka lagu yaqaabo, sidaas darteedna waxa uu sheegay inuu dib uga laabtay go’aankii uu ku Mamnuucay Indhashareerka, Wuxuuse sheegay in taxadar dheeriya ay ka muujin doonaan dadka xirta Indhashareerka oo sida uu sheegay ay suuragal tahay inay ku soo gambadaan Kooxo Argagixiso ah.
Go’aankan cusub ee uu Maxamed Dheere qaatay ayaa lala xiriirinayaa kadib markii Maalmihii la soo dhaafay uu Kulamo gaar gaar ah kula lahaa Muqdisho Culumaa’udiin ay Ehelo yihiin iyo Waxgarad kala duwan, Waxaana si gaara arrintan cadaadis ugu saaray Ganacsade Abuukar Cumar Cadaan oo uu marti ugu yahay Muqdisho Hogaamiye Kooxeedkan.
Wararka ka imaanaya Dhulalka la haysto ee Reer Falastiin ayaa sheegaya in Ciidamadda Isreal ay Toogasho ku dileen nin Falastiiniya oo weerar ku soo qaaday Fariisin ay ku leeyihiin Waqooyiga Marinka Gaza.
Dilka ninkan ayaa yimid Maalin kadib markii ay Dagaalyahanadda Xamaas weerar ku qaadeen Deegaanadda la dajiyay Yuhuudda, Halkaasoo ay la beegsadeen dhawr gantaal oo ah nooca Gacanta laga rido, Waxayna wararku intaasi ku darayaan inaysan jirin cid wax ku noqotay Weeraradaasi ay Xamaas ku qaaday Deegaanadda ay Yuhuuddu degaan.
Dhulalka Reer Falastiin waxaa ka socda Maalintii saddexaad Baroordiiqda loo samaynayo Geeriddii Hogaamiyahii Xamaas, Dr C/casiis Al-Rantiizi, Waxaana maanta iyo shalay aan la furin dhamaan goobihii Ganacsiga ee Magaaladda Gaza.
Xukuumadda Cusub ee Spain ayaa xalay ku dhawaaqday inay Muddo 15 Maalmood ah ugala baxayso Ciidamadeeda ka jooga Dalka Ciraaq.
Ra’iisul Wasaare Jose Luis Rodriguez Zaperto oo horay u shaaciyay in Ciidamadda Spain ay ugu dambayn ka soo bixi doonaan Dalka Ciraaq Bisha June ayaa sababta soo dadijisay go’aankiisa lagu macneeyay kadib markii uu Maraykanku diiday in Qaramadda Midoobay ay door muuqda ku yeelato Arrinta Ciraaq iyo iyadoo ay sii socdaan Dagaaladda looga soo horjeedo Xulufadda qabsatay Ciraaq.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Spain, Micheal Moratinous ayaa xiriir uu Khadka Isgaarsiinta kula yeeshay dhigiisa Masar, Axmed Maahir waxa uu ku sheegay inay go’aansadeen inay ugala soo baxaan Ciidamadooda Ciraaq muddo 15 Maalmood gudahood ah, Wuxuuna hoosta ka xariiqay inaysan sugi doonin Qaraar ka soo baxa Qaramadda Midoobay.
Aqalka Cad ee Maraykanka oo ka jawaabayay hadalka ka soo baxay Spain ayaa laga soo xigtay inay sii wadi doonaan Iskaashiga ay Spain kala leeyihiin Dagaalka ka dhanka ah Ciraaq, Laakiin ma aysan ka hadlin dareenkooda ku aadan Ciidamadda Spain ay kala baxayso Ciraaq oo dhabar jab Siyaasadeed iyo Gaashaandhig ku ah Isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo ee Awooda ku qabsaday Ciraaq.
W/Q.Abdi Wali Ibraahim Aadan (garyare)
Faafin: SomaliTalk.com | April 19, 2004
Isbedelka ku yimid Muqdisho dagaaladii kaddib Guji